Izindaba - 5 Izici eziyinhloko ezithinta ikhwalithi yokumaka yomshini wokumaka we-laser
Ukusebenza komshini wokumaka i-laser kuzoncipha kancane ngemuva kokuthi kusetshenziswe isikhathi eside. Yini imbangela yalokhu? Yiziphi izici eziyinhloko ezithinta ikhwalithi yomaka wokumaka umshini we-laser?
1. Isikhundla esigxile somshini wokumaka i-laser
Isikhundla ebalulekile umshini wokugubha laser kuthinte izinga wokugubha. I-Laser kuphela kusimo sokugxila ukufezekisa amandla amakhulu nomphumela, isikhundla sokugxila ukunquma ukuthi ngabe okulungile, kunomthelela omkhulu yini kwikhwalithi yokucubungula, okuthinta i-laser noma ngabe indima efanelekile ku-workpiece, ukufeza umphumela wokucubungula. Ukulungisa ukuphakama kwelensi ekhanyayo ngesikhathi somsebenzi we-laser kwenza i-laser ifinyelele esimeni sayo esiqine kakhulu. (Isimo esiqine kakhulu sikhonjiswa yi-laser ekhipha ukukhanya okuyimpumputhe okuluhlaza okwesibhakabhaka nokumhlophe, okuhambisana nomsindo omkhulu onjenge-beep).
2. Ukusebenza kogongolo lwe-laser ukugxila Ukusebenza kokugxila kwe-laser kuzothinta ngqo ikhwalithi yokumaka, ukugxila kogongolo lwe-laser kuncane kakhulu, ngakho-ke amandla alo agxiliwe kakhulu. Ngaphandle kokusebenza okuhle kokugxila, awukwazi ukuthola indawo efanelekayo ye-laser, awukwazi ukusebenzisa amandla amakhulu we-laser, futhi awukwazi ukufeza umshini wokumaka we-laser. Esimweni esihle kakhulu sokugxila, ukhalo lwe-beam luhlala lukhona phakathi kwesibuko sokubona kanye nalokho okukhonjiwe.
3. Ijubane lokuhamba kogongolo lwe-laser
Isivinini sokuhamba kogongolo lwe-laser naso siyinto ebalulekile. I-Laser nenqubo yokuxhumana ngezinto ezibonakalayo, ijubane le-laser beam lizothinta umphumela we-laser nokusebenzisana kwempahla.
4. Umshini wokumaka umshini we-Laser
indlela yokumaka umshini wokumaka i-laser akufanele inganakwa. Uhlelo lokupholisa wonke umshini we-laser ungazinza futhi ubeke esimeni sokumaka, ukushisa akuthinti kuphela ukuphunyuka kwe-laser, kuzophinde kuthinte uhlelo lwesifunda, umshini wokumaka i-fiber laser ngensimbi epholile yomoya, ukunciphisa izinga lokushisa langaphakathi lomzimba, futhi ukunciphisa ukwehluleka komshini, ukuthuthukisa ukuzinza kwemishini, futhi kunevolumu encane yokushabalalisa ukushisa okusheshayo.
5. Izinto zokumaka laser
Eqinisweni, umshini wokumaka we-laser ofanayo, ngenxa yokumaka izinto ezihlukile, imigqa yayo emihle nayo ihlukile, uma amandla e-laser asetshenzisiwe ehlukile, khona-ke imigqa yokubeka umthelela emihle nayo iyohluka.